China Fambolena sy fanamboarana diapia bibikely | Bondhot
Amin'ny maha-iray amin'ireo diapia fanary fanary iraisam-pirenena malaza indrindra, manana ny fahaizana manome vokatra tsara kokoa ho anao izahay, toa an'i Amerika Avaratra, Eropa, Amerika afovoany sy atsimo, aostralia, japon, faritra azia pasifika, sns. OEM sy ODM dia mafana avokoa. tongasoa. Ny ekipanay matanjaka dia vonona hanolotra anao ny volavola sy ny tolo-kevitra tany am-boalohany.
Ny fahaizantsika dia farafaharatsiny 60.000 taonina isan-taona. Eto izahay dia manana loharanon-karena, mpiasa mahay, teknolojia ary rojom-pandraharahana matotra. Qingdao sy Lianyungang Port dia eo akaikinay avokoa, ho mora ny fitaterana.
Hanao ny tsara indrindra vitantsika izahay hanome ny vokatra sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika erak'izao tontolo izao!
Ny diaper biby dia karazana fitaovana mpitroka, vita amin'ny pulp landy sy ny polymer absorbent, ampiasaina handraisana ny excreta biby, ny tahan'ny rano mitroka dia mety hahatratra am-polony maro ny volany, ny fitrohana rano dia azo hitarina amin'ny endrika jelly, tsy misy famoahana, tsy miraikitra tanana. Ny embouchure manokana amin'ny ambonin'ny diaper dia handao ny tsiranoka haingana. Izy io dia misy mpiasan'ny bakteria mandroso, izay afaka manala sy mamongotra ny fofona mandritra ny fotoana maharitra.
Pads fanofanana alika alika kely azo alefa
Fitaovana: 3G SAP (Polymer Absorbent Super)
Haben'ny vokatra: 60cm x 60cm
33 * 45 sm, 45 * 60cm, 60 * 90cm
Fonosana: 50 pcs fonosina ao anaty polybag misy karatra miloko, 400pcs ao anaty baoritra.
Valin'ny carton: 62 * 42 * 42 cm
1) lamba malefaka tsy misy tenona malefaka.
2) fiarovana 6 sosona.
3) Fiarovana amin'ny bakteria
4) fonony mahatohitra ranomaso.
5) Tisu mitroka be
6) Mampihena ny fofona neutre
7) Manitra hanintonana biby fiompy
8) Miaraka amina kofehy mora foana
9) Mora esorina
10) Misy 3G an'ny Polymer Super Absorbent (nohafarana avy any Japon)
11) fluff avy any Etazonia
Habe araka ny filan'ny mpanjifa
Loko fenitra toy ny sary, na arakaraka ny isa nomen'ny mpanjifa PMS
Moq 10000 Piece / Pieces, 900000 Piece / Pieces isam-bolana
Ora nanomezana 35 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola 30%.
Deliver Terms FOB, CFR, CIF; Lianyungang, Qingdao, Sina (Tanibe)
Fonosana Kitapo poly, avy eo carton standard manondrana.
Volavola Tongasoa ny volavolan'ny mpanjifa
Aorian'ny varotra Fanamarihana momba ny Pet Inspirer, momba ny kalitao, serivisy, valin-teny sy toro-hevitra amin'ny tsena. Ary afaka manao zavatra bebe kokoa ho anao izahay
Manaraka: Diapers biby azo alefa